ရန်ကုန်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုသည်နယ်ခြားစောင့်တပ်လက်မခံသည့်တိုင်းရင်းသားတပ်များကိုရှင်းလင်းရန်လုပ်ကြံမှုတစ်ခုလော? | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
Comments on: "ရန်ကုန်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုသည်နယ်ခြားစောင့်တပ်လက်မခံသည့်တိုင်းရင်းသားတပ်များကိုရှင်းလင်းရန်လုပ်ကြံမှုတစ်ခုလော?" (1)
လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေ ငြိမ်းအဖွဲတွေကလွဲလို့ခုလည်း သူပုန်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကောင်တွေတိုက်နေတာပဲ။ တဖြည်းဖြညိးနဲ့ အပြတ်ရှငိးမှာပဲ။ လူမိူးစွဲဒေသစွဲတွေကြီးပြီး ကိုယ်ပိုင် အုပ်ခုပိခြင်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ စကားပြောလို့မရရင် လက်နက်နဲ့ပဲရှင်းရမှာပဲ။ ဒီဗုံးကွဲတာမဖြစ်လည်းရှင်းခံရမှာပဲ။